Sambava : Mifamono ny tantsaha mpamboly lavanila sy ny dahalo
jeudi, 12 janvier 2017 11:01
Jiolahy roa no nanao latsak’alina nangalatra lavanila tao Ambodisatrana 2 ny alarobia 11 janoary tokony ho tamin’ny 10 ora. Tsy nampoizin’ireo olon-dratsy anefa fa mbola tao anaty saha ny tompony ka raikitra ny fifanjevoana.
Voan’ny zava-maranitra teo amin’ny foto-peny sy teo amin’ny tanany ny iray tamin’ireo mpangalatra ka nianjera. Raha handeha hisambotra azy anefa ilay tantsaha no nanindrona antsy azy ilay mpangalatra ka nahavoa ny tendany ary potraka ihany koa. Noheverin’ireo olon-dratsy fa maty ilay tantsaha.
Nitsoaka nanavotr’aina ireo mpangalatra taorian’izay. Nanao izay fara heriny hahatongavana tany an-tranony sy nanaitra ny tao an-tanàna kosa ilay rangahy tantsaha. Ny sasany nitondra azy haingana tany amin’ny tobim-pahasalamana Loteriana, ny andian-tanora matanjaka kosa nanaradia ireo mpangalatra.
Tsy hita ireo jiolahy, fa ny fitaovana nentin’izy ireo toy ny kitapo saika hasiana lavanila halatra, ary antsy sy finday iray, ary ila-kapa no hitan’ny mpanaradia.
Nametraka fitarainana eny amin’ny Commissariat de Police Sambava moa ilay tantsaha izay voatafika ary tamin’izany no nampitaraina azy hoe : fa efa atao inona loatra moa ny lavanila izay tsy mbola matoy akory no hamonoana ny tantsaha toy izao, nefa vao volana Janoary izao.